बालकको मृत्युपछि जुम्ला सदरमुकाम तनावग्रस्त
प्रकाशित मिति : ६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार
६ फागुन, जुम्ला । बालकको मृत्युको विषयलाई लिएर स्थानीय वासिन्दाले प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्दा जुम्ला सदरमुकाम खलंगा तनावग्रस्त बनेको छ । मृतक बालकका आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।
दुई हप्ताअघि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको गुठीचौर गाउँपालिका–३ का १४ वर्षका पदम बुढाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि आफन्तले प्रहरीको कुटाइबाट मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन् ।
मृतकलाई मोवाइल चोरीको आरोपमा प्रहरीले सामान्य सोधपुछ गरेर छोडेको प्रहरीबाट खबर आएको जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले बताउनु भयो ।
‘मोवाइल चोरीको आरोपमा उनलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर सोधपुछ पछि छोडिएको प्रहरी साथीको भनाइ छ,’ प्रजिअ थापाले भन्नु भयो ‘यो अब अनुसन्धान र छानबिनको विषय बनेको छ । यसबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति नैै बनाएर छनबिन गर्न गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
मृतकका आफन्तले प्रहरीको कुटाइबाट बालकको मृत्यु भएको भन्दै प्रहरी कार्यालय घेराउ गरेपछि भिड साम्य पार्न प्रहरीले लाठीचार्ज र केही सेल असुर ग्यास प्रहार गरेको थापाले बताउनु भयो ।
मोवाइल चोरीको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पदम बुढासहित ७ जनालाई माघ १८ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले छाडिसकेपछि उनी स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि माघ ३० गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि अभिभावकसँग गएका थिए ।
खुटामा चोट लागेर सुन्निएको अवस्थामा अस्पताल गएका उनको अवस्था नाजुक भएपछि फागुन ४ गते आईसीयूमा राखेर उपचार गरिएको प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. मंगल रावलले बताउनु भयो ।
‘जमेको रगतको टुक्राहरु फोक्सोमा पुगेका कारण बिरामीलाई बचाउन सकिएन,’ डा.रावलले भन्नु भयो, ‘अस्पतालले बिरामीलाई बचाउन अथक प्रयास त गरेकै हो तर, असफल भइयो ।’
उनको कुटपिटबाट मृत्यु भएको हो वा होइन भन्ने विषय पोष्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि मात्र थाहा हुने डा. रावलले बताउनु भयो ।
मृतकका आफन्तलेहरुले भने मोवाइल चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले निर्मम तरिकाले कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको बताएका छन् । घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै सदरमुकाम खलंगामामा आन्दोलन गर्दा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भएको छ ।
झडपमा ६ जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ ।